१० दिनको निषेधाज्ञापछि पोखरामा अब के होला ?Main Samachar
१० दिनको निषेधाज्ञापछि पोखरामा अब के होला ?
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १०:५७ प्रकाशित
पाेखरा १८ मेथ्लाङबाट देखिएकाे पाेखरा उपत्यका । तस्बिर: मेन समाचार संवाददाता
पोखरा । समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस फैलिइसकेको पोखरामा संक्रमणदर दिनप्रति दिन बढिरहेको छ । संक्रमणको उच्चदरलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले निषेधाज्ञाको विकल्प तयार गरी भदौ सुरुवातमै कास्की प्रशासनलाई बुझायो ।
महानगरको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले भदौ २ गतेदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणमा ५ दिन गरिएपछि पुनः ७ गते ५ दिनका लागि थप भएको थियो ।
दुईपटकसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको पोखरा सहित जिल्लामा आज अर्थात् शुक्रबार राति १२ बजेबाट हट्दै छ । अब निषेधाज्ञा हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने सर्वत्र चासो भइरहँदा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले निषेधाज्ञा नहुने तर्फ संकेत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘महानगरमा पुनः निषेधाज्ञा थप्ने तयारी छैन, हुँदैन पनि । निश्चित ठाउँमा आवश्यकता बमोजिम निर्णय गर्न सकिन्छ ।’
पहिलोपटक निषेधाज्ञा गर्दा केही कडाई देखिएपछि पछि थप भएको ५ दिनको निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको थियो । दोस्रो चरणको निषेधाज्ञामा हार्डवयर र बैंक वित्तीय संस्थालाई सहज हुने गरि सञ्चालन गर्न निर्देशन थियो ।
यद्यपि, निषेधाज्ञा थप गरिरहँदा थुप्रै व्यवसाय धरासयी उन्मुख भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । महानगरले पनि पुनः निषेधाज्ञा थप्नेबारे योजना बनाइसकेको छैन । १० दिने लामो निषेधाज्ञा शुक्रबार रातिदेखि हट्ने निश्चितप्रायः बनेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण थप विस्तार हुँदै जाँदा र निषेधाज्ञा नरहँदा महानगरको जोखिम भने झनै बढ्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कतासहित निषेधाज्ञा खुलाउने मनसायमा महानगर छ ।